Chọpụta ụfọdụ omenala ndị Germany | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Alemania, omenala, General
Oge ọ bụla anyị gara mba ọzọ anyị ga-eme ya nchịkọta omenala na ọdịnala ịmara ntakịrị banyere otu ha si nọrọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na na Europe ọdịbendị yiri na enweghịkwa nnukwu ọdịiche dịka mpaghara Eshia, dịka ọmụmaatụ, na mba ọ bụla ha nwere omenaala ha nke anyị kwesịrị ịma iji gbanwee ndụ ha.
na omenala nke Germany ha dị mfe nghọta ma mata. N’ezie, ha yiri ndị nke mba ndị ọzọ dị na Europe, n’agbanyeghi na ọdịbendị ha dị iche na mba ndị ọzọ, tụmadị obodo ndịda, ebe ndị mmadụ na-eghe oghe ụzọ ọzọ na-ekwupụta ihe.
1 Ememe ezumike na Germany
2 Akwụkwọ ịkpọ oku n'ụlọ
3 Mgbe a bịara n’iri nri
4 Nlekọta onwe onye
Ememe ezumike na Germany
Na Germany ha na-enwe mmasị na nnọkọ, nke a bụ karịa gosipụtara. Ha nwere oriri maka mbuli elu nke biya, mmanya ma ọ bụ apụl. Naanị anyị ga-achọ nnọkọ oriri na ọ weụ weụ anyị chọrọ ịga, nke a na-eme ememe karịchaa mgbe ihu igwe dị mma. A na-elebara ndị otu a anya maka nnọkọ buru ibu, ebe ọ bụ na ihe ndị German chọrọ soro ndị enyi gị na ezinụlọ gị nọdụ ala ma rie nris na oge ọnụ. Ọ bụ ezie na mba ndị ọzọ enwere nnọkọ oriri na ọ moreụ moreụ karịa ịgba egwu, na Germany ha lekwasịrị anya na nnọkọ buru ibu iji kwuo, rie ma drinkụọ.
Akwụkwọ ịkpọ oku n'ụlọ
Ọ bụrụ na anyị gaa njem nleta na Germany, nke a enweghị ike ime anyị mana ị maghị, yabụ ọ ka mma ịdọ gị aka na ntị. Ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù igosipụta n'ụlọ mmadụ akpọghị ya, dịka ebe ọ bụla. Ma ndị German nwekwara oke anyaụfụ maka nke onwe ha na ndụ ezinụlọ, yabụ ị ga-eji akọ mee ihe na nke a. Ha enweghị omenaala mepere emepe dịka anyị nwere ike inwe na Spen, bụ ebe a na-ahụkarị ịbịa ụlọ ma nọrọ naanị iri nri. Na mba a, a ga-akpọ gị ma ọ dịkwa njọ igosipụta na enweghị ihe. Ga weta ihe, nkọwa dị ka karama mmanya ma ọ bụ nri dị ka onyinye a kpọrọ.
Mgbe a bịara n’iri nri
Ọ bụ ihe ijuanya etu esi emeso ụmụ anụmanụ nke ọma na Germany. Oge izizi anyị ji anụ ụlọ aga, ọ tụrụ anyị n'anya na anyị nwere ike iji ya banye mpaghara niile, gụnyere ụlọ nri. Ma ha tinyere nkịta mmiri n’elu nkịta ahụ n’agwaghị ya agwa. Ha nwere omenaala nke nlekota umu anumanu di iche na nke mba anyi, mana oburu na anyi ga anu anu ulo, o gha aghaghi inwe akwukwo nile na igwe microchip. N'aka nke ọzọ, n'ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, a na-etinyekarị ego ahụ n'ụgwọ, n'agbanyeghị na n'ọtụtụ ebe, ọ na-abụkarị ndị na-akwụ ụgwọ, ndị na-ehicha ihe na họtel ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ. Ha nwere otu oké ọnụ ahịa, ihe anyị kwesịrị ichebara echiche, ebe ọ bụ na n’obodo anyị ọ bụghị ebe niile. N'otu ụzọ ahụ, na Germany ị ga-ekwu ihe ọ bụrụ na ịchọọghị ọrụ ma ọ bụ nri maka ihe ọ bụla kpatara ya. Ha nwere ezigbo ọkachamara banyere azụmaahịa ma na-achọkarị imeju ndị ahịa ha.
Ọ bụ ebe a ka anyị kwesịrị ịkpachara anya ma ọ bụrụ na anyị si n’omenala na-emepe emepe, ya bụ, ikwu okwu. Na Spain ọ na-adịkarị mmakọ, nye nsusu abụọ, na-ekwu okwu n'olu na-achị ọchị n'olu ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-aga ebe dị ka England ma ọ bụ Germany anyị ga-ahụ na A na-echekwa ụzọ isi kpaa àgwà N'izugbe. Ndị mmadụ na-ekwukarị okwu nwayọ n'ụgbọ njem ọha na eze adịghị nso na mmekọrịta ndị ọzọ. Mgbe a kpọbatara mmadụ, anyị na-ekwo aka ha nwere ike ịbụ nsusu ọnụ, mana naanị otu. Na Spen, a na-enwekarị mmadụ abụọ, mana ebe a anaghị eme ya otu a, ọ na-abụkarị ebe anyị ga-esi nwee isi na mmụọ anyị. Ha anọghịkwa nso iji nweta mmakụ ma ọ bụ kụọ aka na azụ. Ihe oma n’eme bu ka ikwe n’aka ma mee ka i mata onwe gi
Ọ bụrụ na enwere oriri na nkwenye anyị enweghị ike ịhapụ na nke ahụ gafere ókèala bụ Oktoberfest. Emere ya na mbụ na Munich, mana ọ dịkwa ike ịnụ ụtọ ya na obodo ndị ọzọ. Na ememme a ọ na-adịkarị onye ọ bụla iyi uwe ọdịnala, nke a pụrụ ịchọta na ụlọ ahịa na obodo. E nwere ọtụtụ ụbọchị ndị mmadụ na-eri nri ọdịnala ma na-enwekarị ọ beụ beers German na nnukwu ọnụ ụlọ nwere tebụl maka ndị enyi na ezinụlọ iji gbakọta. Ọ bụrụ n ’ịnọ na Germany n’oge emume mmemme a, echefula iyi uwe ndị ọdịnala iji nwee ọ typicalụ na ụdị nri German kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Omenala ndị Germany